शनिबार जन्मने व्यक्तिले जान्नै पर्ने यी कुराहरु ! पुरा पढ्नुहोस ! – PanchKhal Online
Home/रोचक/शनिबार जन्मने व्यक्तिले जान्नै पर्ने यी कुराहरु ! पुरा पढ्नुहोस !
523 15 minutes read
मानिसहरुको विश्वास छ कि जन्मेको महिना, गते, समय अथवा पलले मानिसको जीवनमा प्रभाव पार्ने गर्दछ । यसका साथसाथै दिनको असर पनि जीवन र व्यक्तित्वमाथि हुने गर्दछ ।
यस्तै भारतीय अंक ज्योतिष श्रीमती ज्योतिमा शर्माले शनिबार जन्मेका व्यक्तिहरुको निम्नलिखित गुणहरु बताएकी छिन्ःशनिबार जन्मेका व्यक्ति निकै गम्भीर र जिम्मेवार हुने गर्दछन् ।
तपाईं निकै मेधावी, बुद्धिमान र बिजनेस माइन्डका हुनुहुन्छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने तपाईं हरेक कुरामा पर्फेक्ट हुनुहुन्छ ।तपाईं हाइ क्लास वस्तुहरु मनपराउनुहुन्छ । तपाईंले लगाउने लुगादेखि जुत्तासम्मले तपाईंको हाई क्लास पर्सनालिटी झल्काउँछ ।
तपाईं हुन त सफा मनको हुनुहुन्छ तर कहिलेकाँही स्पष्ट वक्ताको रुपमा तपाईंको आलोचना पनि हुने गर्दछ । तपाईंको लागि कुनै पनि सम्बन्ध निकै महत्वपूर्ण हुने गर्दछ र साथीहरुको लागि जे पनि गर्न तयार हुनुहुन्छ ।
तपाईं पैसावाला हुनुहुन्छ तर तपाईं छिट्टै पैसा खर्च गर्नुहुन्न । तपाईंलाई संगीत र खेलमा रुची हुन्छ । तपाईंलाई रिस उठेपछि नराम्रो सँग उठ्छ भने गलत कुराहरुलाई सहन सक्नुहुन्न । तपाईं जिद्दि हुनुहुन्छ र आफूले भनेको जस्तै हुनुपर्छ भन्ने बिचाररधारणा राख्नुहुन्छ ।
तपाईं कसैलाई पनि ठेस पुर्याउन चाहनुहुन्छ । हरेक शनिबार शनिदेवको पुजा गर्दा हुन्छ नसोचेको लाभ ! [पुजा गर्ने विधिसहित हेर्नुहोस्]
काठमाडौं । धार्मिक ग्रन्थहरुमा शनिबारलाई विशेष दिनको रुपमा मान्ने गरिएको छ । ब्रहमान्डलाई नौ ग्रहहरु को रूप मा वर्णित गरिएको छ । यी नौ ग्रहहरूमा, शनिलाई न्यायाधीश मानिन्छ । शनि सूर्य भगवानको पुत्र हो र मकर कुकुरको मालिक हो। हरेक हप्ता शनिमा तेल दान गर्ने परम्परा रहँदैं आएको छ ।
शनि देवलाई एक महत्त्वपूर्ण देवता भनिएको छ, किनभने शनि देवले हाम्रो कार्यहरूमा फल प्रदान गर्दछ। शनी भगवान सूर्य को पुत्र हो र उसको आमा को छाया छ। यमराज उनका भाइ हुन र यमुना उनकी बहिनी हुन ।
शनि देवको मानवका लागि शुभकामना छ जसले कडा परिश्रम, अनुशासनमा र धर्म पछ्याउने काम गर्दछ उसको सम्मान गर्नुपर्दछ । शान्त रहन हरेक शनिबार तेल दान गर्नु पर्छ यो समय शनि धनु राशिमा रहेको छ । यसकारण वृश्चिक, धनु र मकर राशिमा पनि शनिको साढे सातको दशा रहेको छ । वृष र कन्या राशिमा भने ढय्या छ ।
हरेक शनिबार शनिको साथ, पिपलको पनि विशेष पूजा गर्नुपर्छ। पिपल र खुर्सानीमा पानी छर्कनुहोस् ।
शनीमा तेल चढाउँदा, ध्यान राख्नुहोस् कि तेल वरपरमा पर्दैन। शनिबार कालो तिल दान गर्नुहोस्। छालाका जुत्ता र चप्पल पनि दान गर्दा शुभ मानिन्छ।
हरेक हप्तामा शमीको रूखलाई पनि पूजा गर्नुहोस्। तेलको सामने तेलको दिपलाई जलाउने गर्नुहोस्ह र शनिबार हनुमान को सामुन्ने सर्सुको तेल को दीप जलाएर हनुमान चालीसाको पाठ गर्नुपर्दछ ।
शनिग्रह शनिदेव शनिबार घरमा कहिलै नल्याउनुहोस् यी पाँच कुरा, आउनेछन् गरिबी, संकट
एजेन्सी । हाम्रो नेपाली समाजमा थुप्रै मूल्य मान्यताहरु रहेका छन् र त्यस्ता कतिपय मान्यताहरु हामी चाहेर पनि नकार्न सक्दैनौ । हाम्रा पूर्वजहरुले मान्दै आएका कतिपय कुराहरु शनिबारसँग पनि जोडिएका छन् । शनिदेवमाथि नराम्रो असर नपरोस् भनी हाम्रा पूर्वजहरुले थुप्रै नियम बनाएका छन् । ज्योतिषका अनुसार शनिको असरबाट बच्नका लागि यस्ता मान्यताहरु छन् जसलाई शनिबारका दिन हामीले गर्नुहुँदैन ।
अन्न– शनिबार अन्न पिस्न नदिनुहोस् र यसको खरिद पनि नगर्नुहोस् । यसो गर्दा परिवारमा कलह रहिरहन्छ र शनिबार पिनेको पिठोले घरमा गरिबी निम्त्याउने मान्यता छ । साभार